2011 ခုနှစ်က ဒေ့ါမွန်နဲ့အတူ ဘွန်ဒက်လီဂါဖလား ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီးနောက် အောင်ပွဲခံမှု ပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့် ဟာသတွေ ဖြစ်ခဲ့ပုံကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့ - SPORTS MYANMAR
2011 ခုနှစ်က ဒေ့ါမွန်နဲ့အတူ ဘွန်ဒက်လီဂါဖလား ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီးနောက် အောင်ပွဲခံမှု ပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့် ဟာသတွေ ဖြစ်ခဲ့ပုံကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
လီဗာပူး မန်နေဂျာ ယာဂန်ကလော့က လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ဘိုရပ်ရှား ဒေ့ါမွန် အသင်းနဲ့ ဘွန်ဒက်လီဂါ ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် အောင်ပွဲခံခဲ့ရာမှာ ထရပ်ကားပေါ်မှာ အိပ်ယာထ ခဲ့တဲ့ရတဲ့ အထိ ရယ်မောဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမန်နည်းပြဟာ 2011 ခုနှစ်က ဒေ့ါမွန်ကို ကိုးနှစ် အတွင်း ပထမဦးဆုံး အကြိမ် အမှတ်ပေးဖလား ပြန်လည် ရယူ ပေးခဲ့ပြီးနောက် ဖလား အောင်ပွဲခံမှုကို ဦးဆောင် ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၅၂ နှစ် အရွယ် ကလော့က အမှတ်ပေးဖလား ရယူ ခဲ့ပြီးနောက် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပါတီပွဲကလည်း အရမ်းကို ကောင်းမွန် ခဲ့တယ်လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
Amazon Prime သို့ ကလော့ က ပြောကြား သွားခဲ့ရာမှာ “ကျွန်တော် အဲဒီ အချိန်တုန်းက တကယ် မူးနေ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို အဲဒီတုန်းက အင်တာဗျူး တစ်ချို့ကို ကြည့်ရင် သတိပြု မိနိုင် ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီတုန်းက ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် များများ စားစား မမှတ်မိတော့ ပါဘူး။ ကျွန်တော် တစ်ခုပဲ ကောင်းကောင်း မှတ်မိ ပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော် အခြားသူတွေကို ပြောပြီးပြီလား ဆိုတာတော့ မသေချာ ပါဘူး။
ကျွန်တော်ဟာ ကားဂိုဒေါင်ထဲက ထရပ်တစ်ခု ပေါ်မှာ နိုးလာ ခဲ့တာပါ။ အဲဒီကားပေါ်မှာ ကျွန်တော် တစ်ဦးတည်း ပါပဲ။ ကျွန်တော် ဒါကိုတော့ မှတ်မိ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမတိုင်မီ အချိန်တွေက ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့ သလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိတော့ ပါဘူး။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
ဒီပုံပြင် ကတော့ လီဗာပူး ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် အနည်းငယ် အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပြီး ယာဂန်ကလော့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် အပြီးမှာ ၎င်းရဲ့ အောင်ပွဲခံမှု ဒီလောက် ပြင်းထန်မှု မရှိခဲ့တဲ့ အပြင် ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား နဲ့ မြို့ထဲ လှည့်လည် အောင်ပွဲခံမှု မှာလည်း ပုံမှန် အခြေအနေမှာပဲ ရှိနေ ခဲ့တာပါ။ ဆက်လက်ပြီး ကလော့က ပါတီပွဲမှာ အလွန်အကျွံ အောင်ပွဲခံမှုကြောင့် စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ် ဖြစ်သွား ခဲ့တဲ့ ဒေ့ါမွန်ရဲ့ အကြီးအကဲ တွေထဲမှာ သူတစ်ဦး ဒီလို ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထုတ်ဖော်လိုက် ပါတယ်။
ကလော့ က “ကျွန်တော် နိုးလာ ခဲ့ပြီးနောက် ထရပ်ပေါ်က ဆင်းလာ ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဟာ စက်ရုံကြီး တစ်ခုရဲ့ ဟောခန်း ထဲမှာ ရောက်နေ တာပါ။ အဲဒီနောက် ကျွန်တော် ဒီဝင်းကို ဖြတ်ကျော် လမ်းလျှောက် ခဲ့ပြီး လူရိပ် တစ်ခုကို မြင်တွေ့ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် လေချွန်ပြီး ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဟာ အတော် ကျယ်ကျယ် လေချွန် နိုင်လို့ပါ။ အဲဒီနောက် လူရိပ်ဟာ အနည်းငယ် နှေးသွား ခဲ့တာကို ကျွန်တော် သတိပြုမိ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တေ်ာ ခဏစောင့်လိုက်ပြီး အနားရောက်တော့ ကြည့်လိုက်ရာမှာ အကီဝက်ဇ်ကီ (ဒေါ့မွန် စီးအီးအို) ကို ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက် ရပါတယ်။ ဒီ ကြီးမားတဲ့ ၀င်းကြီး ထဲမှာ သူနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ယောက်တည်းပဲ ရှိနေ ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် အကီဟာ လမ်းပေါ်က မာစီးဒီးစ် ကားဟောင်းကြီးကို လက်တား လိုက်ပါတယ်။ ဒီ station wagon ကို မောင်းလာတာက တူရကီ လူမျိုး တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် အကီက ‘ငါတို့ကို အီတလီတွေဆီ ခေါ်သွားပေးစမ်းပါကွာ’ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလူက ‘No, ကျွန်တေ်ာ အဲဒီကို သွားမှာ မဟုတ်ဘူး’ လို့ ပြန်ပြော ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကီဟာ သူ့အိပ်ကတ်ထဲက ယူရို ၂၀၀ ကို ထုတ်ပြီး ‘မင်းပို့နိုင်မှာပါ’ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပိုက်ဆံကို မြင်သွားပြီးနောက် သူက အိုကေလို့ ပြန်ပြောပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ရယ်စရာ အဖြစ်အပျက်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ကလော့ က “အကီက ရှေ့ခန်းမှာ ထိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က နောက်မှာ သွားထိုင်ပါတယ်။ လမ်းက သိပ်မကောင်း တာကြောင့် ကျွန်တော့် ခေါင်းနဲ့ ဘေးက အရာနဲ့ ခဏခဏ တိုက်မိ နေပါတယ်။ ကျွန်တော် အနည်းငယ် စိတ်တို လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ‘ကကျိ ကကျိ ကကျိ’ ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကြားနေ ရပါတယ်။ ‘ဒီမှာ ဘာဖြစ်နေတာလဲ? ငါများ အိမ်မက်မက် နေတာလား ဆိုပြီး တွေးမိ ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အိမ်မက်မက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကားနောက်ဖုံးထဲကို ကြည့်လိုက်တော့ ကြက်တွေက အပြည့်ပဲဗျာ။
အဲဒီနောက် ကျွန်တော်တို့ဟာ လမ်းအတားတွေကို ဖြတ်ပြီး မောင်းသွား ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လမ်းတားတွေကို ရောက်တိုင်း အကီက ကားပြတင်းပေါက် ထဲက ခေါင်းထွက်ပြီး ပြောရပါတယ်။ သူ့ကို လူတွေ တွေ့လိုက်ချိန်မှာ ‘Oh ၀က်ဇ်ကီပဲ! ပေးဖြတ်လိုက်ပါ’ ကျွန်တော် ဒီထက် ပိုပြီး မမှတ်မိတော့ ပါဘူး။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
အကယ်၍သာ လီဗာပူး အသင်း နှစ် ၃၀ စောင့်ဆိုင်း နေရတဲ့ အမှတ်ပေးဖလား သာ ဒီရာသီ ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ကလော့ ရဲ့ အောင်ပွဲခံမှု ဘယ်လို ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ယခု အဖြစ်အပျက်ကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်း ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
2011 ခုနှဈက ဒေ့ါမှနျနဲ့အတူ ဘှနျဒကျလီဂါဖလား ဆှတျခူးခဲ့ပွီးနောကျ အောငျပှဲခံမှု ပွငျးထနျလှနျးတာကွောငျ့ ဟာသတှေ ဖွဈခဲ့ပုံကို ထုတျဖျောလိုကျတဲ့ ယာဂနျကလော့
လီဗာပူး မနျနဂြော ယာဂနျကလော့က လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှဈက ဘိုရပျရှား ဒေ့ါမှနျ အသငျးနဲ့ ဘှနျဒကျလီဂါ ဖလား ဆှတျခူး နိုငျခဲ့ပွီးနောကျ အောငျပှဲခံခဲ့ရာမှာ ထရပျကားပျေါမှာ အိပျယာထ ခဲ့တဲ့ရတဲ့ အထိ ရယျမောဖှယျရာ ဖွဈခဲ့တယျလို့ ထုတျဖျော ပွောဆို သှားခဲ့ပါတယျ။ ဂြာမနျနညျးပွဟာ 2011 ခုနှဈက ဒေ့ါမှနျကို ကိုးနှဈ အတှငျး ပထမဦးဆုံး အကွိမျ အမှတျပေးဖလား ပွနျလညျ ရယူ ပေးခဲ့ပွီးနောကျ ဖလား အောငျပှဲခံမှုကို ဦးဆောငျ ခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။
အသကျ ၅၂ နှဈ အရှယျ ကလော့က အမှတျပေးဖလား ရယူ ခဲ့ပွီးနောကျ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ပါတီပှဲကလညျး အရမျးကို ကောငျးမှနျ ခဲ့တယျလို့ ဆိုသှားပါတယျ။
Amazon Prime သို့ ကလော့ က ပွောကွား သှားခဲ့ရာမှာ “ကြှနျတျော အဲဒီ အခြိနျတုနျးက တကယျ မူးနေ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါကို အဲဒီတုနျးက အငျတာဗြူး တဈခြို့ကို ကွညျ့ရငျ သတိပွု မိနိုငျ ပါတယျ။ ပွီးတော့ အဲဒီတုနျးက ဘာတှေ ဖွဈခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ကြှနျတျော မြားမြား စားစား မမှတျမိတော့ ပါဘူး။ ကြှနျတျော တဈခုပဲ ကောငျးကောငျး မှတျမိ ပါတယျ။ ဒါကို ကြှနျတျော အခွားသူတှကေို ပွောပွီးပွီလား ဆိုတာတော့ မသခြော ပါဘူး။
ကြှနျတျောဟာ ကားဂိုဒေါငျထဲက ထရပျတဈခု ပျေါမှာ နိုးလာ ခဲ့တာပါ။ အဲဒီကားပျေါမှာ ကြှနျတျော တဈဦးတညျး ပါပဲ။ ကြှနျတျော ဒါကိုတော့ မှတျမိ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီမတိုငျမီ အခြိနျတှကေ ဘာတှေ ဖွဈခဲ့ သလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျော မသိတော့ ပါဘူး။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ။
ဒီပုံပွငျ ကတော့ လီဗာပူး ပရိတျသတျတှေ အတှကျ အနညျးငယျ အံ့အားသငျ့စရာ ဖွဈနမှော ဖွဈပွီး ယာဂနျကလော့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျ ဖိုငျနယျ အပွီးမှာ ၎င်းငျးရဲ့ အောငျပှဲခံမှု ဒီလောကျ ပွငျးထနျမှု မရှိခဲ့တဲ့ အပွငျ ၊ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား နဲ့ မွို့ထဲ လှညျ့လညျ အောငျပှဲခံမှု မှာလညျး ပုံမှနျ အခွအေနမှောပဲ ရှိနေ ခဲ့တာပါ။ ဆကျလကျပွီး ကလော့က ပါတီပှဲမှာ အလှနျအကြှံ အောငျပှဲခံမှုကွောငျ့ စိတျလှတျ ကိုယျလှတျ ဖွဈသှား ခဲ့တဲ့ ဒေ့ါမှနျရဲ့ အကွီးအကဲ တှထေဲမှာ သူတဈဦး ဒီလို ဖွဈခဲ့တာ မဟုတျဘူးလို့ ထုတျဖျောလိုကျ ပါတယျ။
ကလော့ က “ကြှနျတျော နိုးလာ ခဲ့ပွီးနောကျ ထရပျပျေါက ဆငျးလာ ခဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျတျောဟာ စကျရုံကွီး တဈခုရဲ့ ဟောခနျး ထဲမှာ ရောကျနေ တာပါ။ အဲဒီနောကျ ကြှနျတျော ဒီဝငျးကို ဖွတျကြျော လမျးလြှောကျ ခဲ့ပွီး လူရိပျ တဈခုကို မွငျတှေ့ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျော လခြှေနျပွီး ချေါလိုကျပါတယျ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကြှနျတေျာ့ဟာ အတျော ကယျြကယျြ လခြှေနျ နိုငျလို့ပါ။ အဲဒီနောကျ လူရိပျဟာ အနညျးငယျ နှေးသှား ခဲ့တာကို ကြှနျတျော သတိပွုမိ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျော ခဏစောငျ့လိုကျပွီး အနားရောကျတော့ ကွညျ့လိုကျရာမှာ အကီဝကျဇျကီ (ဒေါ့မှနျ စီးအီးအို) ကို ဖွဈနတောကို တှလေို့ကျ ရပါတယျ။ ဒီ ကွီးမားတဲ့ ၀ငျးကွီး ထဲမှာ သူနဲ့ ကြှနျတျော နှဈယောကျတညျးပဲ ရှိနေ ခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီနောကျ အကီဟာ လမျးပျေါက မာစီးဒီးဈ ကားဟောငျးကွီးကို လကျတား လိုကျပါတယျ။ ဒီ station wagon ကို မောငျးလာတာက တူရကီ လူမြိုး တဈဦး ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီနောကျ အကီက ‘ငါတို့ကို အီတလီတှဆေီ ချေါသှားပေးစမျးပါကှာ’ လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီလူက ‘No, ကြှနျတျော အဲဒီကို သှားမှာ မဟုတျဘူး’ လို့ ပွနျပွော ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အကီဟာ သူ့အိပျကတျထဲက ယူရို ၂၀၀ ကို ထုတျပွီး ‘မငျးပို့နိုငျမှာပါ’ လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ ပိုကျဆံကို မွငျသှားပွီးနောကျ သူက အိုကလေို့ ပွနျပွောပါတယျ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
နောကျထပျ ရယျစရာ အဖွဈအပကျြနဲ့ ပကျသကျပွီး ကလော့ က “အကီက ရှခေ့နျးမှာ ထိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောက နောကျမှာ သှားထိုငျပါတယျ။ လမျးက သိပျမကောငျး တာကွောငျ့ ကြှနျတေျာ့ ခေါငျးနဲ့ ဘေးက အရာနဲ့ ခဏခဏ တိုကျမိ နပေါတယျ။ ကြှနျတျော အနညျးငယျ စိတျတို လာပါတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျတျော ‘ကကြိ ကကြိ ကကြိ’ ဆိုတဲ့ အသံတှေ ကွားနေ ရပါတယျ။ ‘ဒီမှာ ဘာဖွဈနတောလဲ? ငါမြား အိမျမကျမကျ နတောလား ဆိုပွီး တှေးမိ ပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော အိမျမကျမကျတာ မဟုတျပါဘူး။ ကားနောကျဖုံးထဲကို ကွညျ့လိုကျတော့ ကွကျတှကေ အပွညျ့ပဲဗြာ။
အဲဒီနောကျ ကြှနျတျောတို့ဟာ လမျးအတားတှကေို ဖွတျပွီး မောငျးသှား ရပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ လမျးတားတှကေို ရောကျတိုငျး အကီက ကားပွတငျးပေါကျ ထဲက ခေါငျးထှကျပွီး ပွောရပါတယျ။ သူ့ကို လူတှေ တှလေို့ကျခြိနျမှာ ‘Oh ၀ကျဇျကီပဲ! ပေးဖွတျလိုကျပါ’ ကြှနျတျော ဒီထကျ ပိုပွီး မမှတျမိတော့ ပါဘူး။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
အကယျ၍သာ လီဗာပူး အသငျး နှဈ ၃၀ စောငျ့ဆိုငျး နရေတဲ့ အမှတျပေးဖလား သာ ဒီရာသီ ဆှတျခူး နိုငျခဲ့မယျ ဆိုရငျ ကလော့ ရဲ့ အောငျပှဲခံမှု ဘယျလို ဖွဈလာမလဲဆိုတာ ယခု အဖွဈအပကျြကို ကွညျ့ပွီး ခနျ့မှနျး ကွညျ့လို့ ရပါတယျ။